"I-Hunsrück Valley View" Ikhaya leholide kunye ne-sauna - I-Airbnb
"I-Hunsrück Valley View" Ikhaya leholide kunye ne-sauna
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCarly
Indawo entle enamagumbi okulala amabini neflethi okanye indlu ekwicomplex etofotofo ukuya kutsho kwezintlanu, enetreyini neefoto ezintle zentlambo neentaba ngezantsi. I-cedar barrel sauna iyafumaneka (ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo).
Le flethi okanye indlu ekwicomplex, yindawo entle yokubuka intlambo engezantsi, le flethi okanye indlu ekwicomplex yeholide yeyona ndawo ifanelekileyo yokuvuselela. Kwi- "Hunsrück Valley View," unokonwabela indalo ejikelezileyo kule ngingqi ngesitayile nangendlela etofotofo. Inamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela elikumgangatho ophezulu, kunye nekhitshi elikhulu/indawo yokuhlala, kunye nelaphu elingaphandle, iflethi inesauna ye-cedarwood (imali eyongezelelekileyo). Amathuba okunyuka intaba aninzi eBruschied, ekwiindawo ezisemaphandleni zaseHunsrück (kufutshane neFrankfurt).
Iflethi isendaweni engaphantsi kwe-souterrain/xa uhamba kwindlu enkulu ehlala intsapho enye nenendawo entle yentlambo. Izakhiwo zangoku, zidibanisa izinto zale mihla zaseJamani nezaseJapan.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ejonge ngasentshona igcwele ukukhanya emini ibe ikubonisa kakuhle ukutshona kwelanga ngokuhlwa. Inesilingi ephezulu (iimitha eziyi-2,5) kunye nefestile enkulu kwindawo yokuhlala enkulu ekhokelela kwintente yakho yabucala.
Ungena kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex esecaleni ukuya kwindawo yakho yokungena. Ungaxhoma ibhatyi yakho uze ugcine izihlangu zakho kwikhabhathi eyakhiwe ngaphakathi ngaphambi kokungena kwindawo yokuhlala, equka igumbi lokuhlala kunye nekhitshi/igumbi lokutyela.
Indawo yokuhlala inesofa entle yesikhumba kunye ne-4K TV eyi-43 "enokufikelela simahla kuNetflix kunye ne-Amazon Prime. Ikhitshi elikufutshane lixhotyiswe ngesitovu esikhulu, isinki, ne-microwave kunye nomatshini wokwenza ikofu weNespresso kunye neketile yeti. Itafile yokutyela yamaplanga ijonge intlambo ngefestile enkulu eseluphahleni.
Ukusuka kwindawo yokuhlala/ekhitshini, ipaseji iya kumagumbi okulala amabini amancinci kunye negumbi lokuhlambela elikhulu. Amagumbi okulala amakhulu amabini anebhedi elala abantu ababini enee-drawer, kwaye igumbi elincinci linebhedi enye netafile (kunye nenye ibhedi esongwayo).
Izinto zokondlula ibhedi zesiNgesi ezingenisiweyo ziyi-lush cotton sateen kwaye ibhedi nganye inemiqamelo emininzi etofotofo. Nceda uqaphele ukuba ngoxa amagumbi okulala eneefestile ezinkulu, afumana ukukhanya okungathethekiyo kuphela, njengoko indlu enkulu yakhiwe phezu kweli gumbi.
Igumbi lokuhlambela elikhulu linesinki entle nesipili neetawuli ezitofotofo.
Le ndlu ikwindawo ethe cwaka ibe kukho indlela engaphantsi kwezithuthi. Ikhaya leholide lijonge kwindawo engaphephekiyo ye-180 ° yentlambo. Ukusuka apha, unganyuka intaba uye kwindawo yokujonga esecaleni kwe "Devils Rock" okanye uhle uye entlanjeni ukuya kumabhodlo enqaba yakudala "Schmidtburg".
I-Bruschied yeyona lali intle kule ngingqi, kwaye asitsho nje loo nto kuba sivela apha. Le ikwayinto esiyivayo kwiindwendwe zethu. Sisoloko sivakalelwa kukuba iBruschied "ifana nekhadi leposi." Yeyona ndawo ifanelekileyo yabakhweli beentaba, abakhweli beebhayisikile kunye nabakhweli bezithuthuthu. Ikwayindawo elungele uhambo lwemini oluya kummandla weFrankfurt (eFrankfurt, eMainz, eWiesbaden), kunye neendawo ezinomtsalane kuMlambo iRhine kunye nentlambo iMosel.
Umbuki zindwendwe ngu- Carly
Siyakuthanda ukubuka iindwendwe ibe siyakuvuyela ukukunika amacebiso okubona le ndawo intle (phezu kwekofu okanye ibhiya ukuba ugqibile!).
Sihlala kule ndlu ingentla. Ngenxa yokuba le flethi okanye indlu ekwicomplex ayinanto yakwenza nendlu enkulu, sinokudibana neendwendwe kangangoko sinako.
Sihlala kule ndlu ingentla. Ng…